April 20, 2021 - ApannPyay Media
ကျောက််ကပ်ဝေဒနာ ကိုိယ်တိုင်ပျောက်ခဲ့လိုု့ မျှဝေခြင်းပါ
April 20, 2021 by ApannPyay Media
ကျောက််ကပ်ဝေဒနာ ကိုိယ်တိုင်ပျောက်ခဲ့လိုု့ မျှဝေခြင်းပါ ကျောက်ကပ်ဝေဒနာ ကိုိယ်တိုင်ပျောက်ကင်းခဲ့ပြီး လူပေါင်း ၅၀ ကျော် ကိုိ မျှဝေခဲ့ရာ အကုန်လုံး သက်သာပျောက်ကင်း ခဲ့ပါသဖြင့် တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပုံတွင်ပြထားသည့်နံပါတ်စဉ်အတိုိင်း ပြုလုပ်ပါ။ (1) အညှာတံပါသော နာနတ်သီးအမှည့်တလုံး ဝယ်ပါ။ (2)မျိုးပွားခေါင်းကိုိ ချိုးပစ်ပါ။ (3)အခွံခွာ မျက်စေ့ထုတ်ပစ်ပါ။ (4)သင့်တော်သောဒန်အိုးတလုံးထဲ အသီးကိုိထဲ့ပါ။ အညှာအတန်ကိုိအပေါ်ထောင်ထားပါ။ အသီး၏ကိုယ်လုံးမြုပ်သည်အထိ ရေထဲ့ပါ။ မီးဖိုပေါ်တင်၍ပွက်ပွက်ဆူ ရေ ၃ပုံ ၁ ပုံကျန်သည်အထိပြုတ်ပါ။ (5)ရေခန်း၍တပုံသာကျန်ရှိချိိန် မီးဖိုပေါ်မှ အိုးကိုချ၍အအေးခံပါ။အသီးကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ပါ။အအေးခံထားသောအရည်ကို မော့သောက်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အန္တရာယ် လုံးဝ မရှိပါ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင် တကိုယ်လုံးဖေါရောင် ဆီးထဲ သွေးပါ သည်အထိ ခံစားရပြီး ဓါတ်မှန်တွင် ကျောက်ကပ်ထိထားသည့်အဖြေ ရရှိထားသူကိုယ်တိုင်ပျောက်ကင်းခဲ့သည့် ဆေးနည်းဖြစ်ပါသည်။ ဤဆေးနည်းကိုိ လမ်းညွှန်ပေးခဲ့ပါသော ၂ခ/၈၄၈၃ … Read more
မြေနေရာမလိုပဲ အိမ်မှာ အာလူးစိုက်ရင်း ဝင်ငွေရှာပါ တော်ရုံလူက ပြောပြမှာ မဟုတ်တဲ့ အိမ်မှာနေရင်း ဝင်ငွေရှာလို့ရမယ့် နည်းလေးကို ပြောပြပါမယ်။ အာလူးကို ပုံးထဲ သို့မဟုတ် အိတ်ထဲထည့်စိုက်မည်ဆိုလျှင် ၁။ အဓိကအနေနဲ့ မြေဆွေးမြေမွဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ၂။ အာလူးကို အပင်ပေါက်အညှောက်လေးများ ထွက်လာသည်အထိ ထားထားပေးပါ။ ထွက်ရှိလာတဲ့ အပင်အညှောက်လေးတွေကို ဓားဖြင့်လှီးယူ၍စိုက်ပျိုးလို့ရသလိုအလုံးလိုက်ထည့်စိုက်လို့လည်း ရပါတယ်။ အိတ်ဖြင့်စိုက်မည်ဆိုပါက အိတ်အတွင်းထဲသို့မြေဆွေးမြေမွ သဲဆန်သောမြေကို တစ်ပေခန့်ထည့်၍ အာလူးကို အနည်းဆုံး (၂)ပင်(၄)အထိ့ ထည့်စိုက်ပါ။ ၃။ ထည့်စိုက်ပြီးပါက အာလူးအပေါ်မှ နောက်ထပ်မြေဆွေး (၄)လက်မခန့် ဖုံးပေးထားပါ။ ၄။အာလူးအပင်ထွက်ရှိလာပါကအပင်၏အမြင့်ကိုကြည့်၍အိတ်ပြည့်သည်အထိ့မြေဆွေးကိုတစ်နေ့နည်းနည်းစီဖြည့်ပေးရပါမည်။ရေကိုအနည်းငယ်စိုရုံလောက်သာလောင်းပေးပါ။ မြေသိပ်သွားမှာစိုးသည့်အတွက်အများကြီးလောင်းပေးစရာမလိုပါဘူး။ တစ်ခုသတိပြုရမှာကတော့တစ်အိတ်ထဲမှာအပင်ရေအများကြီးကိုထည့်မစိုက်ဖို့ပါ။အပင်ရေအများကြီးထည့်စိုက်မိလျှင် အပင်ကြပ်ပြီး ဥမဥနိုင်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဥ ဥပါကလည်းမကြီးထွားပါ။အပင်ရေနည်းနိုင်သမျှနည်းလေကောင်းလေဖြစ်ပါတယ်။စတင်စိုက်ပျိုးသည်မှ ဥများဥသည့်အထိ အနည်းဆုံး အချိန် ၂လခန့်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုပုံးထဲသို့မဟုတ် အိတ်ထဲအာလူးကိုထည့်စိုက်ခြင်းဟာအဟာရဓာတ်မြေသြဇာ အလေအလွင့်မရှိသလို … Read more
ပန်းနာရင်ကျပ် ရှိသူများ ပဲဲစဉ်းငုံဆောင်ထားနော်
ပန််းနာရင်ကျပ််ရှိသူများ ပဲဲစဉ်းငုံဆောင်ထားနော်် ပန််းနာရင်ကျပ်် တသက်လုံး ပျောက်ဆေးနည်း ပန််းနာရင်ကျပ် ရောဂါရှိသူများအတွက် တစ်သက်လုံးပျောက်ကင်းစေသော ဆေးနည်းကောင်းပေးလိုက်မည်။ မိိတ္ထိလာမြို့မှ အဘိုးကြီးတဦး နှစ်နှစ်ကြာကြာ ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါ ဖြစ်နေခဲ့ရာလူပြောများ၍ ပဲစဉ်းငုံ အလုံးလိုက် တစ်နေ့နို့ဆီဘူး တလုံးကျ ပြုတ်၍ ဆားခတ်ပြီး အစမ်းသဘောဖြင့်နေ့စဉ်စားနေခဲ့သည်။ စားနေရင်း နေရထိုိင်ရတာ သက်သာလာပုံ ခံစားရသည် ဆိို၏၊ ထိုိ့ကြောင့် အားတက်၍နေ့စဉ်ပုံမှန် ဆက်စားနေခဲ့ရာ ၃- လကြာလျင် လုံးဝ ပျောက်ကင်းသွားပုံလက်တွေ့ဖြစ်ကြောင်း ရောဂါပျောက်သူ၏ တူ ကျောင်းဆရာကြီး ဦးတင်ဝင်းက လျောက်ထားသည်။ စားသုံးနည်းမှာ လွွယ်ပါ၏၊ ပဲဲစဉ်းငုံအလုံးလိုက် ရေနှင့်နပ်အောင် ပြုတ်ပြီးဆားခပ်၍ ပဲလုံးဟင်းကဲ့သို့ အရေအဖတ် စားခြင်းဖြစ်သည်။နေ့စဉ် နို့ဆီဗူး တစ်လုံးကျစားနေပါ၊ ၄-လ ကြာလျင်် ပန်းနာရင်ကြပ် လုံးဝပျောက်ကင်း၏ ဟု မှတ်ပါ၊ အခြား … Read more
လည်ပင်းကြီး ရောဂါအတွက် တန်ဘိုးမကြီးသော အဖိုးတန်ရိုးရာဆေးနည်းတို
လည်ပင်းကြီး ရောဂါအတွက် တန်ဘိုးမကြီးသော အဖိုးတန်ရိုးရာဆေးနည်းတို “လည်ပင်းကြီးရောဂါ သက်သာစေသည့် မြန်မာဆေးမြီးတို” လည်ပင်းက တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာတာ ၅ နှစ် ရှိပြီဟု ပြောပါသည်။ မန္တလေးမြို့ စိန်ပန်းရပ်မှ ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဆေးလည်း နေ့စဉ် စားနေပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားဖြစ်၍ ဆေးခန်းက ပေးသည့်ဆေးကို နေ့စဉ်တစ်ကြိမ် စားရသည်ဟု ဆိုသည်။ ဆေးကလည်း ဈေးမကြီးပါ။ စားခဲ့တာ တစ်နှစ်ကျော်။ သိပ်လည်းမထူးခြား အနည်းငယ် ပိုကြီးလာသည် ထင်သည်ဟု ဆိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့် တိုင်းရင်းဆေးခန်း လာပြရသလဲ မေးကြည့်သောအခါ ဆရာ့ဆေးခန်းက ဆေးနဲ့ပျောက်သွားတဲ့ အဒေါ်ကြီး တစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့လို့ဟုပြောသည်။ ဆရာက လည်ပင်းကြီး မကုဖူးပါဟု ပြောသည်။ ပျောက်သူအဒေါ်ကြီးက ကိုယ်တိုင်ပြောသည်။ စစ်ကိုင်းနယ်ဖက်မှ ဖြစ်သည်။ ဒူးနာ၍ မန္တလေး ဘုန်းကြီးကျောင်း … Read more
သွေးကစားရင််ဖြစ်တတ်တဲ့”အချက်် ၆ချက် ” နဲ့ “ဆေးနည်းလေး”
သွေးကစားရင််ဖြစ်တတ်တဲ့”အချက်် ၆ချက် ” နဲ့ “ဆေးနည်းလေး” သွေးကစားရင််ဖြစ်တတ်တဲ့”အချက် ၆ချက် ” နဲ့ “ဆေးနည်းလေး” ကိုဗဟုသုတ အနေနဲ့ဝေမျှပါရစေရှင် မီးယပ်သွေးဆုံး အဖြစ်များတဲ့ အရွယ်ဟာလေးဆယ်ကျော် ငါးဆယ် အတွင်းပါ။ တစ်ချို့ လေးဆယ် မပြည့်ခင်် ဆုံးပီးတစ်ချို့က ငါးဆယ်ကျော်မှ ဆုံးတတ်ပါတယ်။ နံပါတ် ၁ အနေနဲ့ သွေးဆုံးမီးယပ်ဆိုတာဟာ …..နည်းလိုက် များလိုက် ဖြစ်တယ်။ဒီလနည်းတယ်။ နောက်လများတယ်။ တစ်ချို့က ရှေ့တိုးလိုက် နောက်ဆုတ်လိုက်လည်းဖြစ်တယ် ။ တစ်ချို့ကျတော့လလိုက်ကြီး ကျော်သွားတတ်တယ်။ဒါက လက္ခဏာ တစ်ခုပါ။ နံပါတ် ၂ က သွေးဆုံးတော့မဲ့ အမျိုးသမီးဟာခွန်အားကျသွားတတ်တယ် ။အိပ်မပျော်ဘူး ဆိုတာမျိုး ဖြစ်တတ်တယ် သွေးဆုံးကာနီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိကိုအကဲခတ်လိုက်ရင်များသောအားဖြင့် စကားတွေ ပိုပြောလာတယ်။ များများပြောလာတယ် ။ပြောလိုက်တာတွေ ကလည်း အဆီအငေါ် … Read more
ရာသီပြောင််းတွင် မျက်စိိနာလျှှင် မျက်စိနာ၊ မျက်လုံးစပ်၊ မျက်ရည်ပူကျခြင်းနှင့် မျက်စိမှုန်ခြင်း တိို့ကို အမြန်ဆုံး သက်သာစေသည့် ဖန်ခါးသီး မူရင်းနည််း မှာတော့ ဖန်ခါးသီး အခြောက်ပါ ။ ဖန်းခါးသီးအခြောက်် မရလျင်အစိိမ်းကို ထောင်းပြီးဆနွင်းမှုန့်အနည်းငယ်ထဲ့ ရေအနည်းငယ်ထဲ့ပီးညအိပ်ခါနီး မျက်ခွံမှာ လူးပီးအိိပ်။ တပတ်ကိိုသုံးရက်လောက်လုပ်။…လူးပီးတာနဲ့မျက်လုံးကို အေးနေတာပဲ။ မျက်လုံး ကိိုက်တာ ခဲတာကအစ ပျောက်ပါတယ်။fb ပေါ်မှာတွေ့လို့ကျနော်စမ်းကြည့်် ကြည့်ပီးတကယ်ဟုတ်လိို့ မျဝေပေးလိိုက်ရပါသည်။ Sai Min Thant ရာသီေျပာင္္းတြင္ မ်က္စိိနာလွွ်င္ မ်က္စိနာ၊ မ်က္လုံးစပ္၊ မ်က္ရည္ပူက်ျခင္းႏွင့္ မ်က္စိမွုန္ျခင္း တို႔ိကို အျမန္ဆုံး သက္သာေစသည့္ ဖန္ခါးသီး မူရင္းနည္္း မွာေတာ့ ဖန္ခါးသီး အေျခာက္ပါ ။ ဖန္းခါးသီးအေျခာက္္ မရလ်င္အစိိမ္းကို ေထာင္းၿပီးဆႏြင္းမွုန႔္အနည္းငယ္ထဲ့ ေရအနည္းငယ္ထဲ့ပီးညအိပ္ခါနီး မ်က္ခြံမွာ လူးပီးအိိပ္။ တပတ္ကိုိသုံးရက္ေလာက္လုပ္။…လူးပီးတာနဲ႔မ်က္လုံးကို … Read more
လတ်တလော ဖြေရှင်းနိုင်သော ကျန််းမာရေးဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်လေးများ
လတ်တလော ဖြေရှင်းနိုင်သော ကျန််းမာရေးဆိုင်ရာ လျှို့ဝှက်ချက်လေးများ ဖတ်ကြည့်လိိုက်ပါ သင်မသိသေးတာတွေ တအံ့တဩ သိစေရမယ် ၁ ) – သင့်လည်ချောင်းထဲမှာ ယားနေတယ်ဆိုရင် …. နားရွက် ကို ကုတ်လိုက်ပါ နားရွက်မှာ. ရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေ ကို လူံဆော်မိတဲ့ အခါအဲဒီ အာရုံကြောတွေဟာ လည်ချောင်းထဲက အာရုံကြောတွေကို အလိုအလျှောက်တုန့်ပြန်စေပြီး ယားယံမူ ကို ပျောက်ကင်းလိမ့်မယ်။ ၂ ) – လူတွေ ဆူညံ့နေတဲ့ နေရာ ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းပြောတဲ့နေရာ တယောက်ယောက်ရဲ့အသံကို မကြားနိုင် ဖြစ်နေလား.. ရုတ်ချည်း ပြောလိုက်တဲ့ အသံကို ကြားဖို့ ဆိုရင်တော့ ညာဖက်နား ကို အသုံးပြုပါ ဂီတ သံစဉ်တွေ ကြားဖို့ ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘက်နား ကို … Read more
ဆီးချိုရှိလျှင် ပဲနံ့့သာ စားပါ
ဆီးချိုရှိလျှင် ပဲနံ့့သာ စားပါ ဆီးချိုရောဂါအတွက် အထူးအစွမ်းထက်် ပဲနံ့သာစေ့စားသုံးနည်း၃မျိုး ပဲနံ့ံသာစေ့က ဆီးချိုရောဂါအတွက် အထိရောက်ဆုံးသော မီးဖိုချောင်သုံံး ဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်။အစာစားပြီးနောက် အချိုစုပ်ယူနှုန်းကို လျှှေ့ချပေးတဲ့အတွက် သွေးချိုနှုန်းကို ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ ပဲနံ့သာစေ့ကို ပုံမှန်စားပေးခြင်းဖြင့် ဆီးချိုရောဂါအပြင်သွေးထဲရှိ မလိုအပ်တဲ့ ကိုလက်စထရော ဓာတ်တွေကိုပါ လျျှော့ချပေးတဲ့အတွက် နှလုံးနှင့် သက်ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်ရခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒါဆို သွေးချိုနှုန်းထိန်းညှိရာမှာ ကူညီပေးမယ့် ပဲနံ့သာစေ့ကို ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့စားကြမလဲ။ ၁။ရေစိိမ်သောက်နည်း ပဲနံ့သာစေ့ကို တစ်ညတာရေစိမ်ပြီး မနက်စောစောအစာမရှိချိန်စားပေးခြင်းကို ရှေးရိုးဆေးနည်းတွေကတည်းက အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အတွက် ပဲနံ့သာစေ့ ၁၅ဂရမ်နဲ့ ရေ ၈ အောင်စလောက်လိုအပ်ပါတယ်။ ပဲနံ့သာစေ့ကို ခွက်တစ်ခွက်ထဲထည့်ထားပါ။ လိုအပ်တဲ့ရေပမာဏကို ဆူအောင်တည်ပြီး ပဲနံ့သာစေ့ထည့်ထားတဲ့ ခွက်ထဲကိုလောင်းပေးပါ။ဖန်ခွက်ကို အဖုံးအုပ်ပြီး တစ်ညတာစိမ်ထားပါ။ မနက်ရောက်ရင် ရေစိမ်ထားတဲ့ ပဲနံ့သာစေ့ကိို ညက်ညောအောင်ကြိတ်ပြီး စိမ်ထားတဲ့ရေနဲ့ရောသောက်ပေးပါ။ ၂။ … Read more
ယောက်ျားလေးတွေ မနှစ်မြိုတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ နေထိုင်ပုံ (၁၀) ချက် အပျင်းကြီးတဲ့ မိန်းကလေးတွေကို ယောကျ်ားလေးတိုင်း မနှစ်သက်သလိုပဲ တချို့အနေအထိုင်မတတ်တဲ့ အသေးအဖွဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာလည်း ယောကျာ်းလေးတွေကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာပါ။ ယခုလို မနှစ်မြိုတဲ့အကြောင်းကို သင့်ကိုဖွင့်ပြောချင်မှပြောပါလိမ့်မယ်။ ဖွင့်ပြောတဲ့အခါမှာလည်း body shaming လုပ်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ယောကျ်ားလေးတိုင်းလိုလို ကိုယ့်ချစ်သူအနားကပ်တဲ့အခါ ဒီလိုအရာတွေကို မနှစ်သက်လို့ပါပဲ။ ဒီလိုအရာလေးတွေကို သိထားမှသာလျှင် ချစ်သူရဲ့အငြိုငြင်ခံရမှုကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ချစ်သူကိုအကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ၁။ သင့်ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအချို့မှာ ပေါက်တတ်တဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို မရိတ်ထားဘူး မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်မှအမွှေးတွေ အရမ်းရှည်နေရင် သို့မဟုတ် ဂျိုင်းမွှေး နဲ့ ခြေသလုံးမှာ အမွှေးတွေရှိနေရင် ယောကျ်ားလေးတွေ အမြင်မှာ ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။ သင့်ရဲ့မျက်နှာကို … Read more
ဆေးဖက်ဝင် ရှားစောင််းလက်ပတ်သုပ်နည််း ရှားစောင််းလက်ပတ်စားရင် ရနိိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ ၁။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကို်လျှော့ချပေးခြင်း လူနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေမှာ လေ့လာထားတဲ့ လေ့လာမှုတွေမှာ ရှားစောင်းလက်ပတ်စားသုံးခြင်းကသွေးတွင်းသကြားဓာတ်ပမာဏကိုလျှော့ချပေးကြောင်း သိရပါတယ်။ သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို အဓိက ထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ အင်ဆူလင်ရဲ့ sensitivity ကို ကောင်းစေလို့ ဒီအာနိသင်ကို ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ၂။ ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေခြင်း ခန္ဓာကိိုယ်တွင်းက ရောင်ရမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အရာတွေကို တားဆီးပေးတာမို့ အရောင်ကျစေတဲ့ အာနိသင်ရှိပါတယ်။ ၃။ သွားကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမွန်ခြင်း သွား ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို ဖျော်ကာ ပလုတ်ကျင်းခြင်းကသွားချေးကပ်ခြင်းကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ပါးစပ်ထဲက အနာတွေကို လျင်မြန်စွာ သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ၄။ မှှတ်ဉာဏ်အားကောင်းစေခြင်း စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းကို သက်သာစေပြီး မှတ်ဉာဏ်အားကို ကောင်းစေပါတယ်။ ၅။ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဓာတ်တွေ ပေါများခြင်း ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ဓာတ်တွေပေါကြွယ်ဝတာမို့ အိုမင်းခြင်းကို … Read more